Blog Posts (5)Discussions (10)EventsGroups (2) Chaw Chaw kg lay's Likes Chaw Chaw kg lay's Groups
venkosiya liked Chaw Chaw kg lay's blog post Facebook ကြော်ကြများအတွက်လင့်များJan 17Chaw Chaw kg lay postedablog postFacebook ကြော်ကြများအတွက်လင့်များfacebook မှာFanpage တွေ Website တွေအတွက် အခပေး ၊ အခမဲ့ ကြော်ငြာတွေအတွက်https://www.facebook.com/advertising (money)http://goo.gl/LxqZ3 (free)http://www.aaafreeads.com (free)http://www.freeadvertisingnetwork.org/ (free)http://howtoadvertiseforfree.net/See MoreDec 31, 2013 0
Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Nov 25, 2013zawzaw liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Feb 8, 2013Chaw Chaw kg lay replied to thadaungsarlay's discussion Copyright လုပ်ခြင်း"copyright ကို အမှန်တကယ် ထောက်ခံပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းမှာတကယ်ရှိသင့်တဲ့အရာပါ။သို့သော် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ တိုးတက်ကာစဖြစ်တဲ့အတွက် copyright လုပ်ဖို့ အချိန်တွေအများကြီးလိုပါသေးတယ်။copyright ကို အမှန်တကယ်…"Jan 31, 2013Chaw Chaw kg lay replied to ATS PTU's discussion Inkjet printer ဆေးဖြည့်နည်း မေးပါရစေ"မင်းကုန်ရင် ဘူးလိုက်ဝယ်ဖြည့်တာပိုကောင်းပါတယ်... ကာလာကုန်ရင်တော့ သုံးဘူးတွဲလျက် ၀ယ်ရပါတယ်။ အနက်ကုန်ရင်တော့ သီးသန့် ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ အနက်ကတော့ အကုန်မြန်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အနက်ကို ၀ယ်ဖြည့်ရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆေးအရမ်းနည်းတဲ့အခါ မင်မလိုက်တော့ပါဘူး။…"Jan 20, 2013Chaw Chaw kg lay replied to May Soe's discussion English Learning"www.khtnetpc.webs.com မှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေ ရပါလိမ့်မယ်။"Jan 20, 2013Kyaw Saw liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 16, 2013Thirdeye liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 16, 2013sweswe liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 16, 2013Chaw Chaw kg lay replied to Newton's discussion BBC OK, MyanarITPro.com NOT OK to see Myanmar characters"In my knowledge there is no myanmar font to install when website write with Padauk Unicode font. But Other Myanmar Unicode need to install myanmar unicode fonts. So you need to install Myanmar Unicode Font, Zawgyi Font and others or Change to use…"Jan 15, 2013KoMyint liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 12, 2013moenyo201@gmail.com liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 3, 2013thein htun liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Dec 23, 2012Chaw Chaw kg lay postedablog postအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)အောက်ပါစာအုပ်များအပါအ၀င် တခြားစာအုပ်များပါ အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။လိုချင်သူများလေ့လာချင်သူများအတွက်…See MoreDec 19, 2012 0
Posted on June 25, 2013 at 2:16am0Comments
facebook မှာFanpage တွေ Website တွေအတွက် အခပေး ၊ အခမဲ့ ကြော်ငြာတွေအတွက်
Continue အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)
ဘယ်လိုမှမထင်ကြပါနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ AddaBlog Post